Israel iyo Baxrayn oo si rasmiya usoo celiyay xidhiidhkoodii diblomaasiyadeed - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
On Oct 19, 2020 460
Ababa Oct 19, 2020 (Tiqimti 09,2013 T.I) (FBC/SOMALI)-Heshiiska oo Mareykanka uu gadhwadeen ka yahay ayaa lagu saxiixay caasimadda Baxreyn, ee Manama, maalinkii Axadda.
Muddo tobanaan sano ah, dowladaha carabta badankood waxay qaadaceen Israel, iyagoo ku adkeysanaya inay dhisi doonaan oo kaliya xidhiidhkooda kadib marka la xaliyo khilaafka Falastiin
Munaasabad ka dhacday Manama fiidnimadii Axada, Baxrayn iyo saraakiisha Israel waxay kala saxiixdeen xidhiidh diblomaasiyadeed oo buuxa. Labada dalna waxaa hadda la filayaa inay dib u furaan safaaraddo.
Wasiirka Arimaha Dibada Baxrayn Abdullatif bin Rashid Al-Zayani ayaa khudbad uu jeediyay ku sheegay inuu rajaynayo “iskaashi midho dhal ah oo dhinac walba ah in uu dhexmaro labada dal.”
Macron: Waan fahmi karaa cadhada Muslimiinta ee ka dhalatay sawirka Nabi Muxamad NNKH
Ingiriiska oo soo celiyay xayiraadihii bulshada ee feyraska…
Macron: Waan fahmi karaa cadhada Muslimiinta ee ka dhalatay…
Sucuudiga oo gaabsaday in uu ka falceliyo aflagaadooyinkii…